အတိုငျပငျခံ၏ Mask ပွိုငျပှဲ ရုရှားသံအမတျကွီးနဲ့ သံရုံးမိသားစုက အထူးဆုရ - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
အတိုငျပငျခံ၏ Mask ပွိုငျပှဲ ရုရှားသံအမတျကွီးနဲ့ သံရုံးမိသားစုက အထူးဆုရ
Photo- Embassy of Russia in Myanmar
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုယျတိုငျ ဦးစီးပွုလုပျတဲ့ Mask ပွိုငျပှဲမှာ ရုရှားသံအမတျကွီးနဲ့ သံရုံးမိသားစုက အထူးဆုရရှိခဲ့ပါတယျ။
“ကြှနျမ အထူးဆုတဈခုခြီးမွှငျ့ပါမယျ။ ဒီဆုကတော့ ရုရှနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Dr. Nikolay Listopadov နဲ့သံရုံးမိသားစုအတှကျပါ။ ကြှနျမတို့ ပွိုငျပှဲကိုအားပေးလိုတဲ့စိတျနဲ့ သံရုံးမိသားစုဝငျ (၃)ဦးလုံး ရုရှလငျနငျသားနဲ့ ခြုပျထားတဲ့ mask တှတေပျဆငျပွီးရိုကျထားတဲ့ပုံက စိတျရှငျလနျးစရာပါ။”လို့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံက facebook စာမကျြနှာကတဆငျ့ မေ ၂၃ ရကျ မှာ ကွညောခဲ့ပါတယျ။
အတိုငျပငျခံရဲ့ Mask ပွိုငျပှဲ ဝငျပွိုငျသူ (၂၁၁၂၀ ) ဦးရှိခဲ့ပါတယျ။
ပွညျသူ အနှဈသကျဆုံးဆု၊ တီထှငျဖနျတီးမှု အကောငျးဆုံးဆု၊ပွညျသူအကြိုးပွုဆု နဲ့ စိတျဝငျစားဖှယျ အကောငျးဆုံး ရညျရှယျခကျြဆု ဆိုတဲ့ အမြိုးအစား ၄ ခုမှာ အနိုငျရသူ ၁၂ ယောကျ ရှိပွီး ရုရှားသံအမတျကွီးနဲ့ သံရုံးမိသားစုက အထူးဆုရရှိခဲ့တာပါ။
အတိုင်ပင်ခံ၏ Mask ပြိုင်ပွဲ ရုရှားသံအမတ်ကြီးနဲ့ သံရုံးမိသားစုက အထူးဆုရ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြုလုပ်တဲ့ Mask ပြိုင်ပွဲမှာ ရုရှားသံအမတ်ကြီးနဲ့ သံရုံးမိသားစုက အထူးဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်မ အထူးဆုတစ်ခုချီးမြှင့်ပါမယ်။ ဒီဆုကတော့ ရုရှနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay Listopadov နဲ့သံရုံးမိသားစုအတွက်ပါ။ ကျွန်မတို့ ပြိုင်ပွဲကိုအားပေးလိုတဲ့စိတ်နဲ့ သံရုံးမိသားစုဝင် (၃)ဦးလုံး ရုရှလင်နင်သားနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ mask တွေတပ်ဆင်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံက စိတ်ရွှင်လန်းစရာပါ။”လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံက facebook စာမျက်နှာကတဆင့် မေ ၂၃ ရက် မှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အတိုင်ပင်ခံရဲ့ Mask ပြိုင်ပွဲ ဝင်ပြိုင်သူ (၂၁၁၂၀ ) ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ အနှစ်သက်ဆုံးဆု၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု အကောင်းဆုံးဆု၊ပြည်သူအကျိုးပြုဆု နဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကောင်းဆုံး ရည်ရွယ်ချက်ဆု ဆိုတဲ့ အမျိုးအစား ၄ ခုမှာ အနိုင်ရသူ ၁၂ ယောက် ရှိပြီး ရုရှားသံအမတ်ကြီးနဲ့ သံရုံးမိသားစုက အထူးဆုရရှိခဲ့တာပါ။